सरकारको आलोचना गर्दा वाइसिएल अध्यक्ष दिपशिखाको पद धरापमा ! | Diyopost
सरकारको आलोचना गर्दा वाइसिएल अध्यक्ष दिपशिखाको पद धरापमा !
काठमाडौँ, जेठ २ । युवा संगठन, प्रेस र जनजाति महासंघको नेतृत्वको जिम्मा पुर्व माओवादीले गर्नेगरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रियस्तरमा सहमती जुटेको छ । युवा संघको नेतृत्व साविकको माओवादीले गर्ने भएपछि स्वतः रामप्रसाद सापकोटा दिपशिखालाई नेतृत्व दिइने निश्चित जस्तै मानिएको छ । तर सरकार विरुद्धको अभिव्यक्ति र आलोचनाले गर्दा दिपशिखालाई युवासंघको नेतृत्व दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आनाकानी गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
तात्कालिन माओवादीमा रहँदा वाइसिएल नेपालको नेतृत्व गर्दै आएका दिपशिखा अध्यक्ष प्रचण्डको नजिकका व्यक्ति समेत हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले समेत युवा संघको अध्यक्षमा दिपशिखालाई नै सिफारिस गरेका थिए । तर छलफलको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्टि देखाएका कारण उनको पद धरापमा परेको अनुमान गरिएको छ ।
गत महिना राष्ट्रपतिले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा समेत दिपशिखाले सामाजिक संजालमा आलोचना गरेका थिए । त्यतिमात्र नभई वुधबार युवा संघ नेपालको स्थापना दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा पनि सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएका कारण नै प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालबिच मतभेद उत्पन्न भएको हो ।